[13 / 02 / 2020] Istanbul Metro inotakura vanhu vanosvika zviuru mazana matanhatu nemakumi mairi mazana maviri emamongi zviuru munaDecember	34 Istanbul
[13 / 02 / 2020] Yambiro yeMwedzi makumi maviri nemana isingabhadharwe Catenary Fidia paTÜVASAŞ	54 Sakarya
[13 / 02 / 2020] RSD Kubata Kuenderana uye Certification Musangano pa Rail Systems	06 Ankara
[13 / 02 / 2020] Vagari Vokutora Nhanho yeVenhoroondo yeDerbent Chitima	41 Kocaeli
[13 / 02 / 2020] Coronavirus Domestic Car Floates TOGG Zvirongwa	34 Spain
Zuva: Ndira 22, 2020
Kamuran Yazıcı, General Manager weTCDD Tasimacilik, uye Rector weYunara University. Dr. Erkan İbiş akasaina chirevo maererano nekufamba kwechitima kwevadzidzi veASASMUS paGeneral Directorate yeTCDD musi wa 21 Ndira. Iye mutorwa anozofamba neiye protocol [More ...]
Kugadzirira kuendesa zvifambiso zvevatakuri kunzvimbo yakazvimirira, TCDD yakaita mazana matatu muzana muzana kuwedzera mumatikiti ekunyorera pane YHT mutsetse. Tikiti yemazuva makumi matatu yekunyoreswa inosarudzwa nevashandi nevadzidzi pamutsara weEskişehir-Ankara iri 30 lira. [More ...]
Rovedza Feri Kushanda muBosphorus vari Kudzoka
'Treni mabereki', ayo ave achishandiswa mukutakura zvinotakura kwemakore akawanda uye anga asingashande kubvira 2013, achazoshandiswa zvakare. Mafuta ekutanga akagadziridzwa uye achave achishanda muna 2020. Ngoro dzezvitima dzakapfuura sei kubva kuSirkeci kuenda kuHaydarpaşa munguva yakapfuura? [More ...]
Kutumira Kutungamira muRussia Zvidzidzo
Izvo zvinoonekwa kuti kutumira kweRussia, iyo inodikanwa zvakanyanya nekuda kwehukama hwedu, iyo yakave nekuvandudza ikozvino, zvakare inoshanda kwazvo. Asi kubvira zvakapfuura pakati penyika mbiri idzi [More ...]
Imbwa iyo yaipotera mubhazi munguva yechando yaidziya vakapfuura
Imbwa, iyo yakatizira mubhazi munguva yechando, yakatidziyira. Iyo imbwa, yakarasikirwa nemuridzi wayo muAntalya uye yaitonhora panguva yekutonhora, yakatizira mu07 AU 0180 plate yeruzhinji bhazi, iyo yakaita rwendo pakati peVarsak-Faculty line. Imbwa nyowani mubhazi [More ...]
Mumiriri weJapan Akashanyira Sivas Chamber of Commerce neindasitiri
Mumiriri weJapan Akio Miyajima akashanyira Sivas Chamber of Commerce neindasitiri (STSO). Akio Miyajima, Mumiriri weJapan, anogamuchirwa nasachigaro wePSSO, Mustafa Eken, akagamuchirwa mune M. Rifat Hisarcıklıoğlu protocol chumba. Eken, [More ...]
Izmir Metropolitan Municipality iri kuwedzera ngarava iripo mukati meganho hwechinangwa chekuvandudza kutakura kwegungwa. Yekutanga yemafirakitori ane mota kuiswa mukushandira gore rino yakatangwa muTuzla paine mhemberero. Kuwedzera chikamu chekufambisa chegungwa mukufambisa kwemadhorobha [More ...]
Kubva nhasi (3000), iyo mari yekusimudzira yeTCDD General Directorate uye TCDD Taşımacılık A.Ş vashandi, vanonzwisiswa se22.01.2020 TL semhedzisiro yakanyanya yakaitwa naGeneral Authorised Union Transport Officer-Sen. [More ...]
Gaziantep Airport terminal Kuvaka uye Apron Kuvaka Kwapera?
Huseyin Keskin, General Directorate of State Airports Authority (DHMİ) uye Sachigaro weBhodi yeVatungamiriri, vakaongorora Gaziantep Airport terminal Chivakwa uye Apron Kuvaka. Nezvazvino mamiriro ekushanda kubva kune zviremera mundima yekuvaka [More ...]
Festivalambaşı Mutambo Wechando Unotanga PaSvondo
Makumi gumi nemashanu emitambo ye Snowambaşı Snow Festival, inoitirwa muÇambaşı Plateau, imwe yenzvimbo dzinofarira dzekushanya muOrdu, inoitwa gore rino. Mutambo uyu, unoitirwa nguva dzose gore rega rega, unova musika wetsika, Svondo, Ndira 15, 26. [More ...]
Mars Logistics uye Beykoz University Saina R & D Cooperation Protocol
Kuenderera mberi nezvidzidzo zvayo mukati mechikamu chekushandurwa kwedhijitari, Mars Logistics yakasaina protocol yekubatana neBeykoz University yekuchenjera kwekuchera uye itsva yechizvarwa tekinoroji mhinduro. Remangwana renzvimbo yezvinhu mukati mechikamu chekushandira pamwe zvese zviri zviviri kudzidza [More ...]
UTİKAD Logistics Sector Chirevo-Chinoshamisa Kuongororwa Kunosanganisirwa mu2019
International Transport and Logistics Service Provider Association UTİKAD yakaburitsa chinyorwa chicha zivisa chikamu. Chirevo chakagadzirirwa muchiedza cheruzivo uye ruzivo rwe UTİKAD Sectoral Relations department Sectoral Relations Manager Alperen Güler [More ...]
Konya Ankara YHT Mubhadharo Fee Yakawedzera 194 Peresenti
TCDD yakaita imwezve muKonya-Ankara High Speed ​​Chitima (YHT). Nemutero wekusimudza, mari yekunyorera yakawedzera ne194 muzana. TCDD yaenda kumwe kukwira. Zvinoenderana neruzivo rwakagashirwa [More ...]
Gaziantep City Hospital uye iyo Rinzira Road ichave yakabatana ne Bridge Bridge
RSD Kubata Kuenderana uye Certification Musangano pa Rail Systems
Local Mota TOGG Coronavirus Shock